Inona no tetik’asa loko loko birao tsara indrindra? - Office Color Schemes
Home » Inona no tetik’asa loko loko birao tsara indrindra?
Inona no tetik’asa loko loko birao tsara indrindra?
Ny loko ao amin’ny biraonao dia afaka manatanteraka betsaka noho ny fanaovana azy pop! Ny drafitry ny fampidiran-dresakao dia manampy ny sarinao ary misy fiantraikany lehibe amin’ny tombotsoan’ny mpiasa, ny fitaomam-panahy ary ny toe-tsaina lehibe. Eritrereto ireo lamina ireo mba hanehoana ny toetran’ny birao mandritra ny fotoana maharitra.
Ultra Violet: manaova fanambarana miaraka amin’ny loko miloko Pantone amin’ny taona — violet ultra. Nieritreritra momba ny aloky ny volomparasy masina, manintona, mahatalanjona ary mitondra fahatsapana fahatokisana sy mahavelona ao amin’ny efitrano rehetra. Na inona na inona na tsia ny habenanao, ny alokaloka dia azo ahitsy amin’ny alàlan’ny drafitra shading ary azo ampiasaina amin’ny andiany maromaro.
Feo tsy tapaka: miaraka amin’ny drafi-drafitra biofilikily, ny endrika modely izay manatevin-daharana ny ampahany amin’ny tontolo ara-dalàna ao anaty toe-javatra manapaka, izay tsy ampoizina akory fa ny feo manankarena sy voajanahary dia ho hita ao anaty haben’ny birao. Rehefa mampiditra maitso miaraka amin’ny mish-mash amin’ny ankapobeny ianao dia afaka manao toe-tsaina mampiadana izay ahafahan’ny mpiasa mijanona ho mavitrika sy mandaitra mandritra ny andro. Somary miloko tanimanga sy loko mainty mifanentana amin’ny blues mangatsiaka dia afaka mandeha lavitra amin’ny fanaovana tontolo tsy milamina sy maoderina.
Ny pasitera mahafinaritra: ny olona sy ny fikambanana dia manao fomba fiaina maotina, toy ny modely manala baraka! Fototra fototra sy mangina, mitovy amin’ny mavokely maintso sy voahangy maizina, dia miara-miasa amin’ny fahatapahan-jiro, toe-tsaina milamina izay mandroso ho velona sy mamelona.
Miverina ny haizina: Betsaka ny tsy mifindra amin’ny fampiasana maizina ao anaty rafitra anatiny, na izany aza ny efitrano misy ny maizina dia mihodina. Ny fandihizana dia heverina ho filana tanteraka fa raha mifanentana amin’ny fahafinaretana amin’ny zavatra maro, ohatra, ary fitaovana. Hatramin’ny gorodona mankany amin’ny tafo, ny maizina dia afaka manamboatra tontolo iainana izay milamina, mahay sy mahavita azy.
Avy amin’ny loko matanjaka mankamin’ny alokaloka manjavozavo, ny fomba maodely amin’ity taona ity dia afaka mampifanaraka ny fikambananao amin’ny alàlan’ny fanatsarana ny tombony sy ny fanatsarana ny toe-tsaina! Amin’ny tontolo iainana ara-barotra, dia tsy afaka miditra amina sombin-doko vaovao vaovao fotsiny isika, ankoatra ireo izay mifanaraka amin’ny sarinao. Na inona na inona ianao mila manisy famafazana amin’ny mpizarazara na mampiditra fitomboana mamirapiratra miaraka amin’ny fahatapahan-kevitray momba ny takelaka sy ny saribakoly mpizara, dia ilaina ny fitaratra ny iray amin’ireo fikambanana tsara fanahy amin’ny alàlan’ny ohatra, ny fitaovana ary indrindra ny fampandihizana.
Ny hery manetsika antsika tsirairay avy. Manolotra fihetseham-po sy fahatsapana ao amin’ny olona tsirairay izy ireo. Tsy mahagaga raha mandany vola be ny fikambanana sy ny mpanao trano mba hahitana ny loko marina ho an’ny entany sy ny fivarotany. Ny fanaovana izany dia miantoka ny mpanjifa hijanona ela any amin’ireo fivarotana ireo ary, ny tena zava-dehibe kokoa, dia mividy. Tahaka izany koa, ny saina manadino ny eritreritra amin’ny alàlan’ny loko sy ny loko miloko voafantina amin’ny fomba mahomby dia afaka manampy “mandray sy manaitaitra ary manome hery” ny tany. Izany, noho izany, dia afaka manampy amin’ny fitomboan’ny fahombiazana sy ny fifamoivoizana fifanarahana.
Betsaka ny fikarohana natao momba ny fiantraikan’ny loko miloko manokana amin’ny asa fanaovan-trano mahazatra toy ny fanangonana, fanovana, fakana an-tariby, firaketana ary ny maro hafa. Ny fanadihadiana ihany koa dia natao mba hahitana ny vokatry ny fisainan’ny biraon’ny fisafidianana ny fahombiazan’ny mpiasa, ny fahombiazana, ny fanatanterahana ary ny fanatanterahana. Ny tanjon’ny tsirairay amin’ireo famotopotorana ireo dia ny fitadiavana ny loko miloko sy ny drafitra tsara indrindra izay afaka manatsara ny firoboroboana ny asa sy ny fanatanterahana manokana indrindra ao anatin’ny toerana voafetra. Ny fanadihadiana tsirairay dia naneho fifandraisan’ny toetran’ny mpiasa sy ny eritreritra misintona azy.
Ireto misy toro-hevitra roa avy amin’ireo mpamorona tiko sy ireo mpitsabo amin’ny alàlan’ny fikajiana loko miloko loko mety.
Diniho ny orinasa – Ny drafitra loko tsy miandany dia mifanentana indrindra amin’ny tena fikambanana. Raha ny voalaza dia, ny mponin’ny efitranon-toeram-piasana dia hanapa-kevitra ihany koa ny loko hoso-doko amin’ny toeram-piasana miankina amin’ny toetrany. Raha toa ka te-hanana fahatsapana zava-dehibe ianao amin’ny haingo stylistic, alao ny loko mafana sy aina toa ny mavo, volomboasary sy ny sisa dia mihevitra fa tsy manam-pahefana izy ireo. Ny manam-pahaizana manokana momba ny feng shui ho an’ny ankamaroany dia manome alokaloka mavo ho an’ny toeram-piasana satria ireo dia ilaina amin’ny famoronana sy ny olana momba ny vaovao. Ho an’ny fiantraikany mangina, ny manam-pahaizana dia manolotra alokaloka toy ny manga-maitso sy ny sisa. Ho an’ny toeram-piasana ampiasain’ny planeta, mpanoratra ary ny sisa dia afaka maka alokaloka toy ny mavo, voasary ary mena ny olona. Ho an’ny manam-pahaizana manokana, ny fampiasana ban, tans ary grays dia manampy amin’ny fanamafisana ny psyche ary manampy koa amin’ny fanitsiana. Ny loko mangatsiaka toa ny manga sy ny maitso dia eritreretina ho an’ny asa mahasosotra toa ny an’ny mpanolotsaina ara-dalàna, mpivarotra boky sy ny sisa satria ireo fanampiana ireo dia manome hery ny fialan-tsasatra sy mangina.
Diniho ny fahazoana efitrano Ho an’ny efitrano birao littler, ny olona iray dia afaka maka loko miloko toa ny fotsy, beige sy ny sisa indrindra ho an’ny tafo satria afaka manampy hamorona sary lehibe kokoa izany. Amin’ny lafiny iray, ny loko maizina dia tonga lafatra amin’ny efitrano birao lehibe satria ireo dia afaka manamaivana sy mahazo aina ny efitrano.
Mifantoha amin’ny fandozana fandrobohana mangatsiaka toa an’i Angela Wright koa miahiahy bebe kokoa amin’ny fametrahana ny aloka noho ny fikosoham-bolo fotsiny. Midika izany fa ny tanjaky ny aloka dia ny antony manasaraka ny fanatanterahana ny mpiasa sy ny fitondran-tena fa ny tond ny tena manokana. Miaraka amin’ireto andalana ireto dia hihamafana ny famirapiratra matanjaka sy mahafinaritra nefa ny tony kokoa amin’ny alàlan’ny fandriana ambany dia ho tony.
Tariho ity dokambarotra ity
Ndao isika handinika ny eritreritra sasany manelingelina hevitra manelingelina toy ny natolotr’i Angela Wright sy ny fomba namahan’izy ireo antsika:
Ny Blue dia manome hery ny Mind-Angela Wright dia manome soso-kevitra ny fampiasana manga ho an’ny toeram-piasana napetrak’ireo mpivarotra boky na manam-pahaizana manokana izay mila manao asa betsaka. I Angela, na izany aza, dia manome soso-kevitra ny hampiasana manga amin’ny famafazana volomboasary mba hanampiana ny fandanjalanjana ny asan’ny saina ary hampitombo ny fahatsapana fahatsapana ho an’ny fomba.
Mampahery ny mavo ny loko mavo – Mampiasa ny loko hoso-doko amin’ny loko tonga lafatra io fampisehoana io noho ny maha-fanahy azy. Izy io dia tonga lafatra amin’ny lamaody sy faritany samihafa izay takian’ny fanavaozana.
Ny maitso dia ho an’ny Balance – Mampiasà maintso amin’ny eritreritrao manelingelina ny eritreritra indrindra indrindra hoe aiza ny vola no hanovan’ny tanana ankehitriny. Ny maintso dia mitondra fitoviana, mangina sy fampiononana.
Ny fiantraikany mena amin’ny vatana – mena dia manampy amin’ny fanehoana kalitao ara-batana sy fanatsarana. Izy io dia tonga lafatra ho an’ny ivon-toeram-pivarotana, toeram-piasana izay hiasan’ny mpiasa sy mpamorona vonjimaika na mifanena amin’ireo mpanjifa sy sehatra hafa izay ilain’ny olona iray tontolo iainana ara-tsosialy na mahadomelina.
Ny fifantohana lehibe dia ny mitadidy rehefa mifidy loko amin’ny biraonao
Tsy misy loko loko miorina amin’ny birao misy azy io no fomba ampiasanao azy ireo.
Fidio izay ampahany ilainao amin’ny loko miloko: saina / vatana / mahay mandanjalanja / fahatsapana.
Mifidiana alokaloka manokana ary misafidy ny fomba ananana manokana na manetry tena ilaintsika.
Ny loko dia tsy misy an-tsokosoko Miasa tsara indrindra izy ireo rehefa voahodidina loko samihafa.
Ireto misy soso-kevitra maro loko loko sy eritreritra ao amin’ny birao mampiasa izay ahafahanao manohana ny fanahin’ny mpiasa ary hanatsara ny fifanarahana ataonao.
White Color Accent Make A Room Look
Bedroom With Brown Wall Paint Color
Fun Navy Super White Bedroom Paint
Paint Colors With Yellow Wood Floor